घुमुवा प्रहरीकै सेटिङमा तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बन्यो रुपन्देही « Drishti News – Nepalese News Portal
घुमुवा प्रहरीकै सेटिङमा तस्करीको ‘ट्रान्जिट’ बन्यो रुपन्देही
३० भाद्र २०७७, मंगलबार 11:41 am
काठमाडौं, ३० भदौ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका घुमुवाको मिलेमतोमा रुपन्देही तस्करीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनेको छ । जिल्लाका सानाठूला सबै किसिमका नाकाबाट तस्करसँग घुमुवा प्रहरीले लाइन मिलाइ भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ तस्करी गराउँदै आएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी बाबजुत पनि जिल्लामा अचाक्ली तस्करी हुने गरेको छ ।
तस्करहरुसँग असुलीका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले घुमुवा टोली नै परिचालन गरेका छन् । कानूनतः घुमुवा प्रहरी परिचालन गर्न पाइँदैन । तर, रुपन्देहीमा भने सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सूचना संकलनका नाममा घुमुवा प्रहरी परिचालन गरी असुली गर्दै आएका छन् । सशस्त्रका घुमुवाले तस्करीसँग असुल्न्छन् भने नेपाल प्रहरीका घुमुवाले यौनधन्दा चलाउने होटलदेखि तस्करहरुसँग असुली गर्छन् ।
सही कामका लागि गोप्य सूचना संकलन गर्ने घुमुवाले जिल्लामा तस्करी र असुली आतंक नै मच्चाएका छन् । अचम्म त के छ भने, सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्रका वीओपीहरुले समेत घुमुवा राखेका छन् । प्रहरीको त कुरै छाडौं, गाउँमा रहेका चौकीदेखि इलाका र जिल्लासम्मै घुमुवा परिचालित छन् र उनीहरुकै असुली धन्दा विगविगी छ ।
असुली धन्दामा घुमुवाका ‘डन’
सशस्त्रका वीओपीदेखि प्रहरीका चौकीसम्म घुमुवा प्रहरी असुलीमा मस्त छन् । सशस्त्र प्रहरी नं. २७ गण हे.क्वा. मा सहायक हवल्दार प्रदीप जवरा र जवान सन्नी चौधरी घुमुवा प्रहरी हुन् । उनीहरुले जिल्लाको सबै नाकाबाट हुने तस्करीमा साथ दिएका छन् । सिद्धार्थ वीओपी, डण्डा भैरहवाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक विजय थापाले सहायक हवल्दार दीपबहादुर अधिकारी र जवान पप्पु गुप्तालाई घुमुवामा परिचालन गरेको छन् ।
अधिकारी तिनै प्रहरी हुन्, जसको दरबन्दी पर्वत भए पनि सशस्त्रका माथिल्लो निकायमा लाइन मिलाएर लामो समयदेखि डण्डामा घुमुवा बसेर असुलीमा मस्त छन् । यस्तै, सशस्त्र वीओपी वयरघाट लुम्बिनीमा ईश्वर कार्की, वीओपी बजरकट्टीमा सहायक हवल्दार ज्ञानसागर पाण्डे घुमुवा छन् । उनीहरुले नै उठबस गरी हाकिमको मात्रै गोजी गरम गर्दैनन्, माथिल्लो निकायका अधिकृतको समेत खल्ती गरम गरिदिन्छन् ।
नेपाल प्रहरीमा पनि घुमुवाको असुली धन्दा अचाक्ली छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका घुमुवा हवल्दार कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, जवानहरु छत्रबहादुर सूर्यबंशी, सविन पौडेल, तुलसीराम यादव असुलीमा तल्लीन छन् । उनीहरुले जिल्लाका सबै ठाउँबाट असुली गरिरहेका छन् । इलाका प्रहरी बेलहियामा हवल्दार खिमानन्द पराजुली र जवान देवी राना, इलाका लुम्बिनीमा विजय थापा, इलाका प्रहरी धकधईमा जवान शिवशंकर धवल घुमुवा प्रहरी छन् । उनीहरुले सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी, काठ, गिटीबालुवा लगायत तस्करहरुसँग मिलेर असुली गर्छन् । इलाका प्रहरी बुटवलमा वीपी कंडेल घुमुवा छन् । उनले गिटीबालुवा, यौन्धन्दा हुने होटल, काठ तस्करसँग असुली गर्छन् ।
अहिले रुपन्देहीमा रातदिन तस्करी भइरहेको छ । तस्करहरुले साइकल, मोटरसाइकल, ट्याक्टर, मिनीट्रकमै तस्करी गर्दै आएको प्रत्यक्षदर्शी बताउँछन् । रहमोद मुसलमान, समीर मुसलमान, खली यादव, छोटु, महावीर, अफरोज खाँन, प्रेम, शैलेश, लल्लु, हैदर अली, शैलेन्द्र, वीरेन्द्र, प्रकाश, मोविन, मास्टर, सुवास, अमरजित, अब्दुल, सीताराम, ललु लगायत तस्करहरुले सशस्त्र र प्रहरीसँगको सेटिङमा तस्करी गर्दै आएका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका रुपन्देहीका सबैजसो नाकाबाट तस्करी हुने गरेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी तस्करी हुने नाका सेमलपानी, मर्चवार, कर्महवा, दुर्गौलिया, मेउडिहवा, बुचीबर्मा, लुम्बिनी हुन् । यहाँबाट मोबाइल, कपडा र हार्डवेयर बढी मात्रामा तस्करी हुने गरेको छ । यस्तै, बेलहिया, बोगटी, करौता, कक्रहवा, भगवानपुर, कालिदहबाट पनि तस्करी हुने गरेको छ ।
रुपन्देहीमा भारतबाट नेपालतर्फ सबैभन्दा बढी तस्करी हुने भनेको कपडा र मोबाइल, हार्डवेयर, सूर्ती हो । यस्तै, मोटर पार्टस्, ब्याट्री, खसीबोका, भैंसी, काजु किसमिस, चिनी, किराना समान लगायत तस्करी हुन्छ । नेपालबाट भारततर्फ मरिच, छोडा, केराउ, कवाड तस्करी हुँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा तस्करहरुले गोदाम बनाएका छन् । नेपाली भित्रिने तस्करीको सामान भैरहवा, बुटवलका बजारमा मात्रै होइन, पोखरा, काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको छ । कोरोना महामारीमा समेत व्यापक तस्करी भएपछि कोरोना फैलिने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् ।
थापा र खड्काको लाइन तोड्न पोखरेललाई चुनौती
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीको प्रमुख भएर एसपी प्रवीण पोखरेल आएका छन् । उनी जिल्ला आएको १० दिन मात्रै भएको छ । तर यसअघिका एसपी हेमकुमार थापा र हाल जिल्लामै रहेका डीएसपी खड्गबहादुर खत्रीले लामो समयदेखि तस्करीको लाइन चलाए । उनीहरुले चलाउँदै आएको लाइन अझैसम्म चलिरहेको छ । एसपी थापा जिल्ला हुँदासम्म डीएसपीले थोरै भाग पाउने गर्थे, थापाको नै हालीमुहाली चल्थ्यो । उनी गएपछि डीएसपी खड्काले अचाक्ली असुली धन्दा चलाउँदै आएका छन् । जानकारहरुले एसपी थापाले रुपन्देहीमा आएका अहिलेसम्मका एसपीहरुमा सबैभन्दा असुली धन्दा चलाएको बताइन्छ ।
उनै थापाले चलाएको तस्करीको लाइन हालका एसपी पोखरेललाई तोड्न हम्मेहम्मे परेको छ । पोखरेल तस्करी नियन्त्रण गर्ने भन्दै रातदिन फिल्डमा खटिने गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । तर उनी कता जान्छन् भन्ने सुइँको जिल्ला प्रहरीभित्रैबाट तस्करहरुसँग पुग्छ र पोखरेल गएको भन्दा फरक नाकाबाट तस्करीको सामान नेपाल भित्र्याइन्छ । एसपी पोखरेल जिल्लामा आएपछि उनी आफै फिल्डमा खटिएर १० दिनमै लाखौं रुपैयाँको तस्करीको सामान समाईसकेका छन् ।
चौकी इन्चार्ज, इलाका प्रहरी प्रमुखहरु र त्यहाँ कार्यरत घुमुवा, जिल्ला प्रहरीका घुमुवाले तस्करीलाई एसपी पोखरेलकाबारे सूचना दिने गरेका छन् । यसमा केही प्रहरी अधिकृत पनि संलग्न छन् । एसपी पोखरेललाई असुलीमा मस्त घुमुवा प्रहरीको जालो तोड्न र तस्करी नियन्त्रणमा सबैभन्दा बढी चुनौति भएको छ । यस्तै, सशस्त्रले पनि तस्करी नियन्त्रणमा उनलाई साथ दिएको छैन । रुपन्देहीका स्थानीय भन्ने गर्छन् एसपी पोखरेललाई यसअघिका एसपी थापाको लाइन तोड्न र घुमुवा प्रहरी हटाउन निकै सकस पर्ने छ ।